musha Asia Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yevhidhiyo mutambi ane tennis "Naomi Chan". Nhasi Naomi Osaka Utwere Nhau pamwe Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehuduku hwake kusvika zvino. Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nyaya yehupenyu pamberi mukurumbira, mhuri yemhuri uye hupenyu hwehupenyu. Kunyanya zvakadaro, mamwe OFF uye ON-Screen zvishoma zvichakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva zvekutsvaga kwake kutamba chimiro nemasimba anoshumira. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Naomi Osaka's biography iyo iri inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Naomi Osaka akaberekwa musi we 16th waOctober 1997 kuHoo-ku muAsaka Japan. Ndiye wechipiri wevana vaviri vakaberekerwa amai vechiJapane, Tamaki Osaka uye baba veHaiti, Leonard Francois.
Naome Osaka vabereki Tamaki naLeonard.
Nyika yeAmerica neJapan yemarudzi akasiyana-siyana neAfro-America nemidzi yeJapan yaiva nemakore matatu chete apo mhuri yake yakabva kuJapan ichienda Long Island kuNew York.
Naome Osaka aingova namakore matatu chete apo mhuri yake yakatamira kuNew York.
Paive pachitsuwa icho Naome nemukoma wake mukuru Mari vakarererwa nevabereki vake nasekuru nasekuru vababa. Vachangogara pachitsuwa, baba vaNaomi Leonard vakatanga kudzidzisa vanasikana vake matambiro etenisi, chiitiko chakazouya mushure mekunge aona hanzvadzi dzaWilliam dzichikwikwidza ku1999 French yakavhurwa.
Kunyange zvazvo Leonard akawana ruzivo rwakawanda mune tennis, akatevera purogiramu yekuti sei Serena uye Venus vakarovedzwa nababa vavo, Richard Williams kuti vave vatambi vakakwanisa tennis.
Naome Osaka pamwe nehanzvadzi yake Mari isati yatanga tenesi yekudzidzira.
Tennis yaizove iyo nzira yeupenyu kuna Naomi nehanzvadzi yake Mari. Vaiita mutambo muLong Island kusvikira 2006 apo mhuri yakatamira kuFlorida kuitira chinangwa chokuwana mikana yakanaka yekudzidzisa.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Dzidzo neKubata Buildup
Dzidzo yaNaomi inosanganisira iye kudzidza paElmont Alden Terrace Primary School muNew York. Paakapedza chikoro kubva kuchikoro, akawana zvekudzidzisa zvekuIndaneti dzakapiwa naS Broward Virtual Middle High School muFlorida.
Naome anozivikanwa alumnus weBroward Virtual Middle High Chikoro muFlorida.
Paainge achiwana dzidzo kubva kune zvikoro zvambotaurwa nezvazvo Naomi aibatanidzwa mune tennis. Paakapedzisa purogiramu yake yepamusoro yezvidzidzo zvekusekondari, Naomi akabvuma kuzvipira kwenguva yakazara kune tennis kuFlorida Tennis SBT Academy uye ProWorld Tennis Academy.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Basa Rokutanga Upenyu
Kusiyana nevamwe vatambi vematafura tennis Naomi haana kukwikwidzana paItF Junior Circuit. Kunyange zvakadaro, akaitamba mune dzimwe nhangemutange shomanana vasati vashandura kuItF women's Circuit. Paaiva paNavija wedunhu rinowanikwa mune dzakawanda zvisingatauri uye mitsetse miviri yekubatana. Kunyange zvazvo Naomi asina kumbokunda musoro paItF level, akapedza semhanya kune dzimwe nguva dzakasiyana.
Zvimwe zviitiko zvakaona Naomi akazoshanda apo aive akwegura 16 uye akakwanisa kuenda kutende reWTA munaSeptember 2013. Rwendo rwacho rwakamubatsira kukwikwidzana nechekuita ku Challenge Bell muQuebec nePan Pacific Open muTokyo. Nzvimbo yepamusoro ye tennis yake yepamusoro inosanganisira kushungurudza nyika Nha. 19 Samantha Stosur paC2014 Stanford Classic uye inosvika kumakwikwi maviri ekutanga ITF ekupedzisira mu2015.
Akakundawo Rising Stars Invitational masewera emakwikwi emakwikwi mana uye akazosvika pakupedzisira kwekupedzisira kwebasa rake rekutanga paWTA 125K Hua Hin Championships muThailand.
Naomi Osaka achibvunzurudzwa ku2014 Stanford Classic padhuze naSerena Williams.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Road To Fame
2016 yakaunza nhau dzakanaka kuna Naomi uyo akakwanisa kumukwidziridza wekutanga slam main draw kuAustralia Open. Zvisinei, akarasikirwa naVictoria Azarenka panguva yechitatu yechitambo. Mamiriro akafanana akadaro kuFrance neU.S. Open apo akazosvika kurwendo rwechitatu rweGurisa Slam chiitiko chechitatu gore iroro.
Naome Osaka kuUS yakavhurwa muna 2016.
Kunyangwe zvakadaro, akakurumidza kusimuka muzvikwereti mushure mekutyisidzira Nha. 12 Dominika Cibulková naNo. 20 Svitolina kuti vauye kumukadzi wokutanga WTA panguva ye 18. Akapedza mutambo weWTA semhanyi kusvika kuna Caroline Wozniacki uye akapinda kumusoro kwe50 yeWTA.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Simuka Mukurumbira
Naomi akaramba asingazivikanwi kunyanya muZ2017 apo akanga asingakwanisi kufambira mberi chero yakakwirira muWTA rankings. Zvisinei, akazviita kumativi matatu eWimbledon uye US inosvinudzwa uye yakagadzikana zvishomanana kuCharleston neHong Kong Open.
Zvichitevera iye aisazovandudza, Naomi akarovera Sascha Bajin semudzidzisi wake mutsva. Sascha, uyo akanga ambotanga kushanda Serena Williams kurova shamwari yakabatsira Naomi kusvika kumativi mana eAustralia Open kwekutanga.
Naomi Osaka akabhadhara Serena Williams 'aimbove kurova mudiwa, Sascha Bajin semurairidzi wake mu2018.
Kubudirira kwakakonzerwa nekubudirira kukuru paIndia Wells Open apo Naomi akakunda mumwe mukomana Daria Kasatkina kuti akunde mutambo. Naomi haana kutora chimwe chinetso kubva muna September 2018 paakakunda US Open nekukunda kubata kwake Idol, Serena Williams.
Naome Osaka akakunda hudiki hwake chidhori, Serena Williams kuhwina iyo US yakavhurwa mu2018.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Ukama Hupenyu
Naomi haana kuroora uye haana kugovana chinhu pamusoro pehupenyu hwehukama hwake huripo. Zvishoma izvo vhidhiyo vanoziva nezvehupenyu hwake hworudo ndeyekuti iye ainge avhara paActor Michael B. Jordan, chokwadi chaakazarurira kuna DeGeneres Show munguva yehurukuro mu2018. Ona chinyorwa chepanguva yaakaita chizaruriro.
Naome Osaka Mukomana Wemukomana Crush.
Jorodhani inoramba ichinyanyisa mumarangariro aNaomi evanhu vanenge vachatarisana nevechikomana sezvaanoramba achiisa pfungwa pakukunda Tennis World. Ndiani anoziva? angave ari kuita zvepabonde muchivande seSerena Williams pachivande aAlexis Kerry Ohanian kwemwedzi ye15 vasati varoorana.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Upenyu hweMhuri
Naomi akaberekerwa mumhuri ye4. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro pababa vaNaomi: Leonard Francois ndiye baba veTennis nyota. Akazvarwa muHaiti uye akanga ari mudzidzi weYunivhesiti yeNew York paakashanyira guta reJapan reHokkaido. Yaiva muguta iro Francois akasangana ndokuroora amai vaNaomi Tamaki.
SaRichard Williams - baba ve Serena naVenus - Leonard single-ruoko akadzidzisa Naome nasisi vake Mari kusvika vatanga kutamba paITF YeVakadzi Dunhu. Ivo baba vevaviri vakaitawo danho rakakosha rekuona kuti vanasikana vake vanomiririra Japan vachipiwa kuti vakazvarwa munyika uye vagara vachinzwa chiJapanese. Leonard anoenderera mberi nekutsigira mwanasikana wake uye nekuvaraira kuti vaise mufaro pane kubudirira.
Naome nababa vake Leonard Francois.
Pamusoro paamai vaNaomi: Tamaki Osaka ndiye amai vemutambo we tennis. Iye anobva kuHokkaido muJapan asi ane "Osaka" sezita remhandara, zita rakapiwawo kuna Naomi naMari nokuda kwe "zvikonzero zvinoshanda".
Zvakakosha kucherechedza kuti Tamaki vabereki havana kubvumirana neukama hwake naLeonard. Somugumisiro, Tamakai naLeonard vakatama kubva kuHokkaido kuenda Osaka uko Naomi nehanzvadzi yake vakaberekerwa. Amai vanotsigira vana vane mbiri yekuraira Naomi muJapan, mutauro iyo tennis nyanzvi inonzwisisa asi haikwanisi kutaura zvakanyatsonaka.
Naome naamai vake Tamaki.
Nehanzvadzi yaNaomi: Naomi haana hanzvadzi asi hanzvadzi Mari iyo yakakurira kutamba tennis semwana. Sezvo nguva yakaenda nevakaita maitiro avo makuru ekutambisa kwepamusoro sepamusoro munaMarch 2011 uye kaviri vakarwisana sevadzidzisi.
Yokutanga yaiva muna March 2012 paItF $ 10K muitiko mu Amelia Island. Mari akakundwa Naomi mumharaunda yechiitiko chacho. Zvisinei, musangano wechipiri wakaona Naomi akakunda Mari muna March 2014 munguva yeItf paMexico. Kunyange zvazvo Mari isina kuita zvakawanda mukutambira tennis, Naomi anoona hanzvadzi ine rudo uye inotsigira seanonyanya kukwikwidzana naye uye chinokurudzira.
Naome anotora Mari semukwikwidzi wake mukuru uye kurudziro.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Zvimwe Zvako
Chii chaunoziva nezvaNaomi kubva muruvanze? Gara shure apo tinokuunzira maitiro ehupenyu hwake kuitira kuti tibatsire iwe kuva nemufananidzo wakazara wake.
Kutanga kubva, Naomi ane chirevo uye anonyara. Nzira yakachengetwa isingawanzoitiki kune nyeredzi inofanirwa kuva chiratidzo chemidzi yake yeJapan. Achitaura nezvechimiro, uyo aimbova mudzidzisi weSascha Bajin akataura kuti: "Ndaifunga kuti akanga ari zvishoma pane diva nokuti haana kutaura zvakawanda. Haana kunyatsotarira maziso eumwe munhu, asi izvi ndizvo nokuti aigara achinyara ... Kare kumashure ndakanga ndisingazivi nokuda kwechikonzero chipi. "
Naome ane akachengetedzwa persona.
Kunyange zvakadaro, anodiwa nevakawanda nekuda kwekutsvaga kwake uye nyore. Imwe nyanzvi ye tennis yakawanda ine murairo wakanaka weChirungu uye inonzwisisa chiCreole, mutauro unoshandiswa nababambuya naNahosi vaNahosi kuti vaurirane naye panguva yekugara kwemhuri kuLong Island kuNew York.
Pamusoro pazvose, anodada neese ega chinhu chemidzi yake uye haatadzi kuyeuchidza vatori venhau nezvehunhu hwake hweHaiti pese pavanongomuti chiJapanese Iye anoda imbwa uye anonyanya kubatikana mukutamba mitambo yemavhidhiyo kunyanya Pokemon. Chii chimwe? anoda memes.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Lifestyle
Naomi ane mambure ari kukura nekukurumidza anofungidzirwa kunge angangoita madhora mamirioni masere mu8. Nemutengo wakadaro, Naome anorarama samambokadzi kuimba yake yekugara muBoca Raton, Florida, United States. Imba ine zvese zvivakwa zvaanoda kudzidzisa uye kuzorora.
Taura nezvekufamba, Naome haana jeti yakavanzika asi anobhururuka kekutanga kirasi kune kwake kushanya. Anogona kuonwa zviri nyore achifamba mumigwagwa yeFlorida mumotokari dzinosanganisira asi hadziganhurirwe kuMini Cooper Clubman JCW mota yemhando yepamusoro uye Audi Q7.
Naome Osaka anogara achibhururuka kirasi yekutanga.
Naomi Osaka Utano Hwokuwedzera Untold Biography Facts: Untold Facts
Naome ndiye mutambi wekutanga wechiJapan kuhwina mukombe weGrand Slam singles uyezve mutambi wekuAsia wekutanga kuve wepasi rose.
Naome Osaka akaverengerwa Nha. 1 kekutanga muna Ndira 28, 2019.
Akakunda Serena Williams mumitambo yavo yese, yekutanga yaive kuMiami Masters munaKurume 2018. Yechipiri yaive kuUS yakavhurwa kwaakatora zita remutambo kubva kuna Serena akapererwa. Kununura kutaura kwake nguva gare gare Naomi mupfungwa akakumbira ruregerero kune vateveri nekuita kwake basa. Maererano naye: “Ndinoziva kuti munhu wese anga achifarira (Williams) uye ndine hurombo kuti zvaifanira kupera seizvi. Ndinoda kuti ndinokutendai nekuona mutambo. ”
Anoshungurudzika Naomi anokumbira ruregerero kune fan yekukunda hudiki hwake chidhori Serena Williams.
Naome anotsigira uye anofarira kutsigirwa nekambani yemitambo yepasirese - IMG. Vagadziri veMitambo - Yonex, dhizaini kambani - Adidas, inogadzira mota -Nissan Motor, ndege yeJapan - All Nippon Airways pakati pevamwe.
Naome Osaka anotsigira All Nippon Airways pakati pemamwe makambani.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Naomi Osaka Childhood Story plus untold biography zvinyorwa. At biography yemwana, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!
Zvese zvinonakidza uye zvinokurudzira. MWARI VATORA ZVESE.